कसरी काठरोउटर बनाउने - समाचार - मिन्हौ किING्गोम आर्ट्स ï¼ AF शिल्प कं, लि।
हामीलाई कल गर्नुहोस् +86-13110532532
गृह सजावटमा हस्ताक्षर गर्नुहोस्
घर सजावट भित्ता हुक
वसन्त काठ र मेटल रोपाईहरू
फल-काठ र धातु शिल्पहरू
क्रिसमस काठ र धातु शिल्पहरू
कसरी काठरोउटर बनाउने
बनाउँदाकाठ लाग्ने, तपाईंले पहिले केही हल्का ठोस काठ छनौट गर्नुपर्नेछ, र त्यसपछि त्यसलाई तपाईंको लम्बाइमा काट्नुहोस्। सामान्यतया, त्यहाँ अधिक आयताकार वा वर्गहरू छन्। काटने पछि, तिनीहरूलाई आकार अनुसार निर्माण, र गिलास गोंद वा अन्य पानी प्रयोग दृढतापूर्वक टाँस, र यो पूर्ण रूपमा सुक्खा र दृढ छ पछि, तपाईं फूलहरू बढ्न माटो राख्न सक्नुहुन्छ।
कसरी बनाउनेकाठ लाग्ने
१. काठ छान्नुहोस्
बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराकाठ लाग्नेपहिले काठ छनौट गर्नु हो, हल्का ठोस काठ छनौट गर्नुहोस्, र पारगम्य र नाश नहुने काठ छनौट नगर्नुहोस्, किनकि पछि काठको भाँडामा पानी हाल्नु आवश्यक छ, यदि काठ उपयुक्त छैन भने। फूलको भाँडो पछिल्लो चरणमा सडनेछ, जसले पछिल्लो बोटको बृद्धिलाई असर गर्दछ, र यसलाई कायम राख्नको लागि यो अधिक कष्टकर हुनेछ।
काठ छनौट गरेपछि, about० सेन्टीमिटरको लम्बाइ, १० सेन्टीमिटर चौडाइ र cm सेमी उचाईमा काठ काट्नुहोस्। निर्दिष्ट लम्बाई, चौडाई र उचाई मापन गर्न र तपाईं चाहेको भाडाको आकार अनुसार मा काट्न सकिन्छ, र तपाईंले चाहानुहुने भाडाको लम्बाइले लामो टब काट्न सक्छ। यदि तपाईं फराकिलो हुन चाहनुहुन्छ भने, लम्बाई कम गर्नुहोस् र काठको चौडाइ बढाउनुहोस्।
काटिएको काठ लम्बाई, चौडाई र उचाईको आकार अनुसार निर्मित छ। सामान्यतया, त्यहाँ तीन लामो बफल्स र दुई साना साइड बफल्स छन्। वर्गाकार टबलाई उही लम्बाई, चौडाई र उचाईको पाँच ब्लकहरू आवश्यक हुन्छ। तिनीहरू निर्माण पछि, गिलास ग्लू वा अन्य पानीको पानी प्रयोग गर्नुहोस् यसलाई स्थिरताका लागि, र यो पूर्ण रूपमा सुक्नको लागि कुर्नुहोस्।
Ad. माटो लोड गर्नुहोस्
सुक्खा काठको भाँडो यसको समग्र दृढता परीक्षण गर्न माटोले भरिन्छ। यो सहि छ भनेर पुष्टि गरेपछि यसमा संस्कृति माटो थप्नुहोस्। काठको भाँडामा रूखहरूको लागि काठ काट्दा, केहि साना प्वालहरू तल पन्च हुनुपर्दछ, जुन फाइदाजनक हो ड्राईनिंग, अन्यथा, टबको तल्लो एकदम भिजेको हुन्छ, जुन बोट बिरुवाको लागि अनुकूल छैन।
अघिल्लो:मिन्हौ किH्गोम आर्ट्स Home AF क्राफ्ट्स कं, लिमिटेड बाट गृह सजावट खरीद गर्न स्वागत छ।
कसरी काठरोउटर बनाउने2020/09/15
काठ रोपाउनेहरू बनाउँदा, तपाईंले पहिले केही हल्का ठोस काठ छनौट गर्नुपर्नेछ, र त्यसपछि तपाईंलाई चाहानुहुन्छ लम्बाइमा काट्नुहोस्।
काठको प्लान्टर, धातु रोपाउने, घर सजावट, छुट्टी सजावट वा pricelist बारेमा सोधपुछको लागि, कृपया तपाईंको ईमेल हामीलाई पठाउनुहोस् र हामी २ 24 घण्टा भित्र सम्पर्कमा रहनेछौं।
चेनडियानहु उद्योग क्षेत्र, गान्झे शहर, मिन्हौ, फुझू, चीन
प्रतिलिपि अधिकार © २०२० मिन्हौ किH्गोम आर्ट्स ï¼ AF शिल्प कं, लि। - वुडन प्लान्टर, मेटल प्लान्टर, होम डेकोरेशन, छुट्टी सजावट सबै अधिकार सुरक्षित